Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwezvakatipoteredza kuchiri kutarisisa kwekugadzirwa kwemachira ehembe dzakarukwa mukati megore uye zhizha ra2021
Munguva yekucheka, ichi chidiki uye chega theme. Kushora kuva nevamwe, uchitsigira kutaura kwakananga, zvidiki, zvakaputsika, uye zvakasarudzika hunhu hwechizvarwa chino; kutapika ndiyo yavo yakapusa, inosetsa uye ine hushamwari nzira yekutaura, uye zvakare ine chekuita ...
Maitiro ekuverenga huwandu hweshinda yekusonesa. Nekuwedzera kwemutengo wemachira mbishi zvigadzirwa, mutengo wekusona tambo, kunyanya yekumusoro-yekupedzisira tambo yekusonesa, iri kukwirawo. Nekudaro, nzira dzazvino dzekuverenga huwandu hweshinda yekusonesa inoshandiswa nemakambani ekupfeka ndeye ...
Kugadzirwa kwemuchina wemuindasitiri wekushambadzira nekutengesa, kupinza kunze kwenyika zvakaderera mu2019 Chidimbu chemachira nemidziyo yezvokupfeka (kusanganisira michina yemachira nemachira ekusona) zvakaramba zvichiderera kubvira 2018. Kuburitswa kwemachina ekusona emumaindasitiri mu2019 yadonha ...